အလိုအလျောက်တံဆိပ်ကပ်စက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - တရုတ်အလိုအလျောက်တံဆိပ်ကပ်စက်ထုတ်လုပ်သူများ
SHL-1520 အလိုအလျောက်ဒေါင်လိုက်တံဆိပ်ကပ်စက် ၁။ ထုတ်ကုန်ပုံ ၂။ ပစ္စည်းကိရိယာများ ၁။ ပတ်ပတ်လည်ပုလင်းများသို့မဟုတ်ဆလင်ဒါပစ္စည်းများအားဒေါင်လိုက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်ဤပစ္စည်းကိရိယာကိုအသုံးပြုသည်။ ၂။ စွမ်းအားဖြင့်ထပ်တူဖြစ်သောတင်းမာမှုကိုထိန်းချုပ်သောထောက်ပံ့ရေးတံဆိပ်များ၊ တည်ငြိမ်။ မြန်သောထောက်ပံ့ခြင်း၊ တံဆိပ်တိုက်ကျွေးခြင်း၏မြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေသည်။ ၃။ ပုလင်းခွဲခြင်းယန္တရားသည် stepless speed speed ကိုထိန်းညှိရန်အတွက်ထပ်ပေါင်းထားသောရေမြှုပ်ဘီးကိုအသုံးပြုသည်။ ပုလင်းခွဲထားသောအကွာအဝေးကိုအလိုအလျောက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 4. ဒီစက်သည်အဆင့်မြင့်ထိတွေ့မှုကိုအသုံးပြုသည်။
SHL-1582 Horizental Labeling Machine ၁။ ကုန်ပစ္စည်းပုံရိပ် ၂။ ပစ္စည်းကိရိယာများ ၁။ Ultra wear-label တံဆိပ်လှိမ့်ယန္တရား၊ ပိုလီယိုထရန့်ပစ္စည်းများကိုအထူးအသုံးပြုခြင်း၊ 2. အဆင့်မြင့် Plum ဘီးတိုက်ကျွေးရေးယန္တရားရိုးရှင်းတည်ငြိမ်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ပျက်စီးလွယ်သော။ ၃။ တင်သွင်းသောဝက်ဝံများကိုသယ်ဆောင်သည့် roller များတပ်ဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ အရာဝတ္ထုများကိုလှိမ့် ၀ င်စေရန်ထိရောက်မှုရှိစေရန်အတွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်။ ၄။ တည်ငြိမ်။ ကြာရှည်ခံနိုင်သောစက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်စံသတ်မှတ်ထားသောစံသတ်မှတ်ချက်ကိုကျင့်သုံးသည်။
SHL-2510 အလိုအလျောက်နှစ်ဖက်တံဆိပ်ကပ်စက် ၁။ ကုန်ပစ္စည်းပုံ ၂။ ပစ္စည်းကိရိယာများ ၁။ ဤစက်ကိရိယာများကိုပတ်ပတ်လည်ပုလင်းတစ်လုံး (သို့) နှစ်ဖက် (တံဆိပ်တိုများ)၊ တစ်ဖက် (သို့) စတုရန်းပုလင်းနှစ်ဖက်စလုံး၊ တစ်ဖက် (သို့) နှစ်ခုတပ်နိုင်သည် ပြားချပ်ချပ်ပုလင်း၏ဘေးထွက်များ (ဥပမာခေါင်းလျှော်ရည်၊ ရေချိုးခန်းဂျယ်လ်၊ စားသုံးနိုင်သောဆီ၊ ချောဆီ၊ အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာ၊ မျက်စိပေါက်စသည်) ။ ၎င်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ရှိသည်။ ၂။ စွမ်းအားဖြင့်ထပ်တူဖြစ်သောတင်းမာမှုကိုထိန်းချုပ်သောထောက်ပံ့ရေးတံဆိပ်များ၊ တည်ငြိမ်။ မြန်ဆန်သော ...
Shl-1520 အလိုအလျောက်ဓာတ်သတ္တုရေဘူး / ဖန်ပုလင်း၊ ပလတ်စတစ်ပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်
SHL-1520 အလိုအလျောက်ဒေါင်လိုက်တံဆိပ်ကပ်စက် ၁။ ထုတ်ကုန်ပုံ ၂။ ပစ္စည်းကိရိယာများ ၁။ ပတ်ပတ်လည်ပုလင်းများသို့မဟုတ်ဆလင်ဒါပစ္စည်းများအားဒေါင်လိုက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်ဤပစ္စည်းကိရိယာကိုအသုံးပြုသည်။ ၂။ စွမ်းအားဖြင့်ထပ်တူဖြစ်သောတင်းမာမှုကိုထိန်းချုပ်သောထောက်ပံ့ရေးတံဆိပ်များ၊ တည်ငြိမ်။ မြန်သောထောက်ပံ့ခြင်း၊ တံဆိပ်တိုက်ကျွေးခြင်း၏မြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေသည်။ ၃။ ပုလင်းခွဲခြင်းယန္တရားသည် stepless speed speed ကိုထိန်းညှိရန်အတွက်ထပ်ပေါင်းထားသောရေမြှုပ်ဘီးကိုအသုံးပြုသည်။ ပုလင်းခွဲထားသောအကွာအဝေးကိုအလိုအလျောက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 4. ဒီစက်ကိုအဆင့်မြင့် t ကိုအသုံးပြုသည်။
Shl-1520 အလိုအလျောက်ရေပုလင်း / ဖျော်ရည်သောက်ပုလင်း / အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်
SHL-1520 အလိုအလျောက်ဒေါင်လိုက်တံဆိပ်ကပ်စက် 1. ကုန်ပစ္စည်းပုံ ၂။ ပစ္စည်းကိရိယာများ1။ ဒီပစ္စည်းကိရိယာများကိုပတ်ပတ်လည်ပုလင်းသို့မဟုတ်ဆလင်ဒါ objects.2 ၏ဒေါင်လိုက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ စွမ်းအင်ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းတင်းမာမှုထိန်းချုပ်ရေးထောက်ပံ့ရေးတံဆိပ်များ၊ တည်ငြိမ်။ အစာရှောင်ခြင်း၊ ပုလင်းခွဲထုတ်သည့်ယန္တရားသည် stepless speed speed ကိုထိန်းညှိရန်အတွက် sponge ဘီးကိုအသုံးပြုသည်။ ပုလင်းခွဲထားသောအကွာအဝေးကို arbitraril အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
SHL-3520 ထောင့်ဖြတ်တံဆိပ်စက် 1. ကုန်ပစ္စည်းပုံ ၂။ ပစ္စည်းကိရိယာများ1။ ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ပြားချပ်ချပ်နှင့်စတုရန်းသေတ္တာများအတွက်တစ်ခုတည်းနှင့်ထောင့်ဖြတ်တံဆိပ်များတည်ငြိမ်သောအစာကျွေးခြင်းနှင့်ကြီးမားသောကြားခံ space.2 နှင့်အတူ (ထို Cartoner's linkage line ကို) ကပ်နိုင်ပါသည်။ ချောမွေ့ပြီးတိကျမှန်ကန်သော proofreading ကိုသေချာစေရန် Synchronous ကွင်းဆက်ကာကွယ်ခြင်းယန္တရား။ အကြီးစားညှိနှိုင်းမှုအကွာအဝေး။ သေတ္တာအမျိုးမျိုးနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ....
SHL-1530 အလိုအလျောက်လေယာဉ်ပျံတံစက် ၁။ ထုတ်ကုန်ပုံ ၂။ ပစ္စည်းကိရိယာများ ၁။ သတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုပြားချပ်ချပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ၂။ ဒီစက်သည်အဆင့်မြင့်ထိတွေ့ထားသောလူ - စက်မျက်နှာပြင်၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတည်ဆောက်ပုံနှင့်အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ၃။ စွမ်းအားဖြင့်ထပ်တူဖြစ်သောတင်းမာမှုကိုထိန်းချုပ်သောထောက်ပံ့ရေးတံဆိပ်များ၊ တည်ငြိမ်။ မြန်သောထောက်ပံ့ခြင်း၊ တံဆိပ်တိုက်ကျွေးခြင်း၏မြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေသည်။ ၄။ ရေမြှုပ်ကောင်သည်တံဆိပ်အားပိုမိုခိုင်မာစေရန်တံဆိပ်ကိုအလိုအလျောက်လှိမ့်ပေးသည်။ 5. ဒီစက်က SUS304 ထုပ်ပိုးထားသောပစ္စည်း ...